U-Tory Lanez Ngokudibeneyo uShot Megan Thee Stallion-Iindaba eziseNigeria kunye noGl
IVeki yefashoni ye-Heineken Lagos ibhiyozela 'Ishumi ngeFashoni'
Tu-ory Lanez otyholwa ngokudubula uMegan Thee Stallion, igqala lamalungelo oluntu uMfu uC. Vivian udlulile, uGabriel Martinelli de kube sekupheleni kuka-2020. Hlala wazi neRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzibambe. kwi, ukonga ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UTory Lanez utyhola uMegan Thee Stallion
Kukho iingxelo zokuba Canadian rapper, UTory Lanez yayingumntu owathi wadubula I-Megan Tea Stallion. UMegan Thee Stallion wafumana ukulimala kwiinxeba zokudubula ngeCawa nge-12 kaJulayi ngo-2020.
Imithombo yeendaba ixele ukuba uTory Lanez udubule ngemipu ngexesha lokuxabana noMegan Thee Stallion emotweni yakhe.
UTory ukhuphe udubulo ngaphakathi emotweni ngelixa uMegan wayengaphandle. Kukho ividiyo kwaye amapolisa ayaphanda. Le yimeko yendoda eyenzakalisa emzimbeni kunye nokuhlukumeza umfazi, " umthombo utyhiliwe.
Olu phuculo lwamva luyeza kwiintsuku emva kokuba ividiyo ivele kwi-intanethi kaMegan Thee Stallion ophuma kwi-TV ka-Tory Lanez ngento ebonakala ngathi iphaphazela yeenyawo ukusuka ezinyaweni zakhe.
2. IGhana: Icandelo lezangaphandle lezaMacandelo ukuze lihambise imfuneko yesatifikethi sokuzalwa xa ifumana ipasipoti
USekela-Mphathiswa Wezangaphandle, uMohammed Habibu Tijani
UMphathiswa Wezangaphandle uthi isebenzisana ngokusondeleyo nabezangaphakathi, oorhulumente beengingqi kunye namanye amaqumrhu, ukwenza isatifikethi sokuzalwa njengenye yeemfuno zokufumana incwadi yokundwendwela.
Ngokuka-Sekela Mphathiswa Wezangaphandle, Mohammad Habibu Tijani, nangona isatifiketi sokuzalwa sele siyenye yeemfuno zokufumana incwadi yokundwendwela, khange kube luxwebhu olusemthethweni ukubonisa ubungqina bokwenene njengomntu waseGhana ngenxa yokuba kukho iimeko apho abanye abantu baye bahambisa ezizezona.
3. UMzantsi Afrika: uNosiviwe Mapisa-Nqakula kunye nomyeni baphinde bavela kwi-COVID-19
Umphathiswa wezokhuseleko uNosiviwe Mapisa-Nqakula
UMphathiswa woKhuselo noMkhosi wamajoni aseMazantsi Afrika UNosiviwe Mapisa-Nqakula kunye nomyeni wakhe UCharles Nqakula, ngubani na uMcebisi ngezoKhuseleko kuZwelonke kuMongameli, uzuze kwi-COVID-19.
Umongameli, owakhupha ingxelo ngolwe-Sihlanu, nge-17 kaJulayi, wathi urhulumente uyakholiswa kukwazi ukuba esi sibini senze impinda. U-Nosiviwe Mapisa-Nqakula kunye nomyeni wakhe bavavanywe benesimo sengqondo esincinci kwaye okwangoku bodwa.
Umphathiswa kwi-Ofisi kaMongameli UJackson Mthembu bathi zonke iimpawu zabo bazichithile kwaye bazicoca.
4. Umfu u-Vivian, igqala lamalungelo oluntu elasebenza kunye noMLK, usweleke aneminyaka engama-95
UMongameli Barack Obama uvulela iMbasa kaMongameli yeNkululeko ye-C. Vivian kwigumbi laseMpuma kwi-White House.
Umfu. I-CT Vivian, igqala elithandekayo lamalungelo oluntu eliye lahamba kunye noMfu. UMartin Luther King Jr., usweleke kwikhaya lakhe e-Atlanta, abathandekayo bakhe bathi ngoLwesihlanu. Wayeneminyaka engama-95. Intombi kaVivian, UDenise Morse, uqinisekisile ukusweleka kukatata wakhe kwaye uxelele I-media ukuba yena Oyena mntu ubalaseleyo owakha wakhona emhlabeni.
I-titan yamalungelo oluntu yabethwa sisibethi malunga neenyanga ezimbini ezidlulileyo kodwa ibibonakala ngathi ilungisiwe ngaphambi kokubawayeka nje ukutya”Kwaye baswele unobangela wendalo, umhlobo kunye neqabane kwishishini Nika Imilambo sitsho.
UVivan wayekhuthele kuqhankqalazo lokuhlala-e-Peoria, Illinois, ngo-1940, kwaye wadibana noKing ngexesha le-1955 yaseMontgomery yebhasi - umboniso owakhuthazwayo Iipaki zeRosa ' ukwala ukunikezela isihlalo sakhe kumkhweli omhlophe. Uqhanqalazo oluninzi lweenyanga ezili-13 lutsala ingqalelo yamanye amazwe.
Uvelwano lwethu luyaphuma lusiya kusapho lwakhe.
5. UGabriel weGabriel uGabriel Martin ngaphandle kude kube sekupheleni kuka-2020 onokulimala edolweni
UMartinelli utyikitye isivumelwano esitsha sexesha elide neArsenal kule nyanga
IArsenal iqinisekisile ukuba iBrazil UGabriel Martinelli izakuphuma de kuphele unyaka ngokulimala kwamadolo. Umdlali oneminyaka eyi-19 ubudala, oye wajoyina i-Ituano ehlotyeni eledlule, wenzakala ngedolo lakhe lasekhohlo kuqeqesho ngoJuni 21.
UMartinelli, osaye ukora amanqaku ali-10 kwi-26 ebonakalayo kulo lonke ukhuphiswano ngeli xesha lonyaka, uye wenza utyando ukulungisa isilonda kwityotyombe lakhe. Isiteyitimenti sika-Martin malunga noMartinelli sathi eli tyendyana laphila kwakhona kwi-kne brace emva kokuhlinzwa kwinyanga ephelileyo.
Uhlobo Rave Julayi 17, 2020